Isiswedish roulette - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Rally Sweden waba amazingKwaye alikwazi ukwahlula kuphela fantastic ngenxa eziboniswe ekuqaleni debut lokulima. Twisted ukuba umda i-uzibeke le emidlalo Thriller wayeya kunikela a anamashumi amanqaku ozayo ukuze famous ababhali ka-adventure ndaxelelwa ke rally Sweden, ngexesha phantsi kwempembelelo yomoya edlulileyo macala onke, rally Monte-Carlo. Kulungile, Uthixo kumsikelela, rally Monte Carlo, ihlabathi rally championship besiya enye ikhalenda ngenene eshushu kwethuba. Lo mzuzu, mhlawumbi, waba i isigqibo ifekta kwi umbuzo ka-ophumeleleyo ye-rally Sweden. Kodwa malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka ekubeni ukuthenga into okanye kuphulukana nayo into, uzole zihleli. Kwaye, ngelishwa, umzekelo kuba oku kwaba Evgeny Novikov, egama car overturned kwi penultimate kwethuba. Eugene belikwazi ukuqhubeka rally kwaye nkqu ukugqiba kwi phezulu ishumi, kodwa kuphela ngomhla ninth indawo. Mhlawumbi, inkcazelo ethile, iqonga shouldn ukuba zibandakanye nawe"iinjongo, imixholo kunye imizuzwana", kodwa kwimeko rally Sweden- manani ngokupheleleyo ibonakalisa strain apho zonke abakwicandelo inkqubo yalandelwa i-ujikeleziso ye-roulette. Kwaye kunokwenzeka ukuba ukuqikelela ixesha enjalo iziphumo mzuzu xa kwaba ezicetywayo"imali". I-crew kunye omtsha car ngomhla wesibini ugqatso kwexesha lokulima celebrates i-victory. Yintoni iinjongo ingaba iqela kwi-phambili pilots kwi-eva kwexesha lokulima. Yesibini ndawo rally Monte Carlo waba ngenene engalindelekanga, ngaphezu yintoni singathi silindele. Ukuba ukuthetha malunga nam, kuba nam engundoqo imbono ngu i-uzinzo ka-performances, ngakumbi uphuhliso. Kulo nyaka uphelileyo thina uphumelele ababini i-rally, rhoqo kwi-baphile, kodwa ke alifumanisanga azisa tangible iziphumo. Njengoko kuba lwenkqubo, ngoko ke ubuncinane icacisa iqela yithi rhoqo finishes kwi phezulu ezintlanu. Ewe, uxinzelelo ikhona. Kwaye ezinzima kakhulu. Namhlanje thina kunye u-e-omhle kakhulu inyathelo nje, kwaye mna andinaku ndithi lanto ndine kokuba abanye ezinzima luncedo kuzo isantya. Thina kunye wachitha ngomhla we-edge malunga ithi into, kunye abanye vala amanqaku thina kugqitywa ngomhla othile stages. unnecessary inkululeko. Kodwa ke kuvunyelwe kum ukuba uzive ngcono inkqubo yokuhamba-hamba, ukuqonda njani kakuhle imoto ephiwe road, khululeka i-gripgenericname. Kodwa ikuvumela ukuba ngaphezulu ngokuchanekileyo ukwenza zonke maneuvers. Mhlawumbi, kodwa akunjalo ngoku ndizama ukutshintsha yakho lakho, isimbo.
wathi, njani kufuneka ndibeke lo
Kwaye ngalo mzuzu isantya asiyiyo eyona nto iza kwenzeka kanye mna nani ulawulo lomthetho car. Xa Ufuna kuphela waqala indlela le projekthi ifektri iqela, ndaba nethuba ukuba ride Nani kwi-rally car. Ke wathi ukuba sihamba"ngokwesini amandla", njengoko akunazo ilungelo kuba ezingachanekanga. Kwaye ngoku Kufuneka ilungelo kuba ezingachanekanga. Kuyo yonke kuxhomekeke ethile, imeko. Ngamanye amaxesha kufuneka umngcipheko ngaphezu ndingathanda, kodwa nayiphi na umngcipheko kufuneka ilungelelaniswe. Rally Monte Carlo sinayo yonke waphela kwi-ukungaphumeleli, kwaye ngoku kufuneka ixesha ukuze kubuyiselwe ukukholosa. Ngalo mzuzu ndine hardly naliphi na ilungelo ukwenza impazamo. Makhe sibone ukuba oku kuya kunceda kwethu kwi-balwe kuba wesithathu ndawo. Wokuqala rally kwexesha lokulima, enew iqela, enew car.
ufana umdlalo apho sikazwelonke engenakwenzeka ukuba ukuqikelela ixesha.
Sasivuya uqinisekile kwi-umthamo we pilots, kodwa ukuqikelela ixesha yayo yonke ngayo eli qela ayikwazanga.
Nangona kunjalo, asikholwa overestimate zethu izakhono, njengoko asazi njani kwixesha elizayo imoto uya khona.
Ngoko ke kwangoko ukuya kuthi.
Rally Monte Carlo kakhulu ethile, kwaye unpredictable.
Kwi-Sweden, iimeko ingaba ngakumbi ezithile, kodwa ke? kuphela ebusika umjikelo ka-Indebe yehlabathi. Nantoni na engakumbi ethile, kusenokuba wathi emva classic gravel stages, umzekelo emva rally ka-Germany. Kubalulekile ukuba kukho siya kukwazi ukuhlola umgangatho imoto. Alas, sidinga young pilots. Ngaxeshanye, Carlos, kwaye Luiz ndonwabe kakhulu nge-bam indima kunye negalelo umsebenzi iqela. Akunjalo ngoku sidinga abacebisi ngubani onako unikezelo zabo amava ukuba ulutsha pilots. Endleleni, ndicinga ukuba ngoku babengafuni zithanda compete kunye young abantu.
Abantu Ke iintlanganiso Kwi-Cleveland: Free yobhaliso
- Kōrerorero Huira ki Te tangata Mō
ividiyo Dating ividiyo incoko-intanethi free ukuphila umsinga guy ividiyo incoko erotic Ndijonge kuba occasional iintlanganiso ukuhlola wam iphepha i-intanethi incoko ngaphandle ividiyo ukuhlangabezana a kubekho inkqubela omdala Dating ngaphandle ubhaliso ividiyo dating site ngaphandle ubhaliso